Abasebenzi abaMqoka | Local Government Action
Osodolobha bayimakhansela akhethwe amalungu omkhandlu kamasipala. Ngabe usodolobha unamandla amangakanani? Lokhu kuncike ekutheni ngabe umkhandlu kamasipala wakho unika usodolobha amandla okwengamela, noma ngabe kunekomidi eliphethe elibandakanya usodolobha kanye namanye amakhansela akhethiwe. Emikhandlwini yomasipala abancane kakhulu, onamalungu ayisishiyagalolunye noma ngaphansi, ikhansela ngalinye liba namajoka amabili okungelokuba isikhulu nelokushaya imithetho. Uma ikomidi linikezwe amandla okuphatha, usodolobha uba usihlalo wekomidi. Usodolobha uba nejoka lokumisa ama-ajenda ekomidi nokuqhuba imihlangano, kodwa akanawo amandla phezu kwamalungu ekomidi.
Uma usodolobha enamandla okwengamela, angaqoka ikomidi likasodolobha. Ikomidi likasodolobha lifana nekhabhinethi ezingeni likamasipala wasekhaya. Aliphoqelekile ukubamba imihlangano yalo nomphakathi noma ukubandakanya amanye amalungu omkhandlu. Uma usodolobha engekho noma engatholakali, iphini likasodolobha liqhubeka namajoka akhe.
Ngesinye isikhathi usomlomo ubizwa ngokuthi usihlalo womkhandlu kamasipala. Usomlomo ukhetha amalungu omkhandlu amaningi futhi unejoka lokushayela imihlangano yomkhandlu kamasipala, ukudidiyela i-ajenda yomhlangano, ukuphoqelela uMgomo wokuziPhatha, ukulawula izinkulumo-mpikiswano kanye nezingxoxo, kanye nokubamba imihlangano yomkhandlu. Usodolobha noma usomlomo aba nejoka lokuqinisekisa ukuthi imibhalo iyadluliselwa emphakathini ngokwesigaba 1 soMthetho wokuGqugquzela ukuThola uLwazi.
Ubani usotswebhu weqembu?
Iqembu lezepolitiki ngalinye elimelwe kumkhandlu kamasipala linosotswebhu weqembu. Osotswebhu bamaqembu babizwa usomlomo ukuze bahlangane bamise i-ajenda futhi babeke isikhathi semihlangano, banqume ukuthi amakomidi azokwakheka kanjani, kanye neminye imisebenzi. Usotswebhu weqembu umela iqembu elikhulu emkhandlwini kamasipala. Iqembu ngalinye linosotswebhu walo emakomidini kamasipala.
Uma ikhansela lakho lingabizwanga noma lingayihambi imihlangano yomphakathi ukuze libike ngemisebenzi yomkhanldu, cela usotswebhu weqembu ukuze athathe izinyathelo. Unelungelo lokwaziswa ngemisebenzi yomkhandlu.
Ubani ikhansela lamasipala lakho?
Amakhansela amasipala abekelwe ukuthi abe abaxhumanisi phakathi komphakathi nomkhandlu. Akhethwa okhethweni lukamasipala noma lohulumeni basekhaya ukuze amele izindawo asuka kuzo.
Azi ikhansela lakho! Umthetho uphoqa amakhansela ukuthi eseke ukuzibandakanya komphakathi futhi amele izidingo zemiphakathi. Kumele aqinisekise ukuthi izindaba zemiphakathi ziyangena kwi-ajenda kamasipala womkhandlu. Amakhansela ayabandakanywa ekuphasisweni kwezinqumo ezithathwa umkhandlu ngokuvotela izindaba ezifana nezinqumo, ukuguqula inqubomgomo, i-IDP kanye nesabelomali sonyaka. Anethuba lokumela izidingo zezindawo asuka kuzo.
Amakhansela kulindeleke ukuthi:
avame ukuxoxisana nabantu basezindaweni asuka kuzo ukuze athole uvo lwabo ngezinqumo zomkhandlu.
aqonde futhi ethule izidingo zomphakathi
aqoqe ulwazi kanye nezikhalo eziphathelene nokuhlinzeka ngezidingo kukamasipala bese abikele umkhandlu ngazo.
Phezu kwalokho ikhansela kumele:
lihlinzeke umphakathi wakho ngolwazi mayelana ne-ajenda, usuku, isikhathi kanye nendawo okuzobanjwa kuyo imihlangano yomkhandlu
liqinisekise ukuthi izikhalo zomphakathi ziyabhekelelwa futhi zibonakale enqubweni ye-IDP.
litholakale ukuze kuqinisekiswe ukuthi liyakwazi ukumela imibono yabantu nganoma oluphi udaba oluthinta umphakathi.
Ubani umphathi kamasipala wakho?
Umphathi kamasipala uyinhloko yezokuphatha uhulumeni wasekhaya. Uqokwa umkhandlu ophethe. Umphathi kamasipala unejoka lokuphatha imisebenzi yansukuzonke yokuphatha umasipala nokuqinisekisa ukuqaliswa kwezinhlelo nezinqubomigomo.
Izinhlinzeko ezibalulekile zokuchitshiyelwa koMthetho weziNhlaka zoMasipala yilezi:
Ukuchibiyela isigaba 56 kuzochaza ukuthi ukuqokwa kukamphathi kamasipala noma iphini lakhe akuzukusebenza uma lowo muntu engenawo amakhono, ulwazi, ukufaneleka noma iziqu ezimiswe uNgqongqoshe.
Abaphathi bamasipala abavumelekile ukusebenza ehhovisi leqembu lezepolitiki, ngisho noma ngabe lisebenza ngokugcwele, ngokungagcwele noma ukuba yibamba. “Ihhovisi lezepolitiki” lichaza isikhundla sikasihlalo, iphini likasihlalo, unobhala, iphini likanobhala noma umgcinimafa weqembu lezepolitiki kuzwelonke noma esifundazweni, esifundeni noma kwenye indawo iqembu elisebenza kuyo.
Esinye isigaba sihlinzeka ngokuthi umsebenzi wakunoma omuphi umasipala oxoshiwe ngenxa yokuphula imigomo yokuziphatha angakwazi ukuphinda aqashwe kunoma omuphi umasipala emuva kokuphela kwesikhathi esimisiwe.
Umthetho omusha uveza nokuthi umsebenzi oxoshelwe ukuphula umgomo wokuziphatha kwezezimali, inkohlakalo noma ukukhwabanisa, angephinde aqashwe kungakapheli iminyaka eyishumi.
Amakhansela akhethwe uwe ukuze akumele. Lokhu kuchaza ukuthi kumele enze imisebenzi yawo ngendlela abangaphendula ngayo nengenamfihlo. Waphoqe ukuthi enze imisebenzi yawo!
Amakhansela aholwa uMgomo wokuziPhatha futhi uma liphula uMgomo wokuziPhatha lingabhekana nokuqondiswa izigwegwe. Sebenzisa umdwebo olandelayo ukuze uqaphele ukuthi ngabe amakhansela akho enza izinto ezifanele, ngokoMgomo wokuziPhatha
UMthetho wokuGqugquzela ukuThola uLwazi
UMthetho weziNhlaka zoHulumeni